Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 493784 times)
« Reply #690 on: September 18, 2011, 04:38:03 PM »
"နင့်ကိုငါ စိတ်ညစ်အောင်လုပ်တာတောင် နင်ပြန်မငြင်းခဲ့ဘူးနော်!
နင့်ဒေါသကို နင်ဘယ်လို ထိန်းခဲ့တာလဲ!"
"ထူးတာပေါ့။ နင့်ရဲ့သွားတိုက်တံနဲ့ ဆေးတာလေ"
« Reply #691 on: September 21, 2011, 12:18:38 AM »
" Wanted wife "
" Take my wife"..
Credit to P.Z.Thein
« Reply #692 on: September 21, 2011, 12:23:24 AM »
This is what we do during the EXAMZzz :-D:-D
( ←_←) (→_→)
« Reply #693 on: September 21, 2011, 12:24:31 AM »
Credit to D.Theint
ALLRIGHT ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ပြပါ။
ဘယ်ခြေထောက်၊ ဘယ်လက်၊ ဘယ်ဘက်မျက်လုံး၊ ဘယ်ဘက်နားရွက် မရှိတဲ့လူကို ခေါ်တာပါ ဆရာမ ......
« Reply #694 on: September 21, 2011, 12:28:00 AM »
Attitude for work~
Japanese version : :
If none can do it, I must do it!?
Arabs version :
Wallahi? If one can do it, let him do it
« Reply #695 on: September 21, 2011, 12:31:29 AM »
ဒေါက်တာ ။ ခင်ဗျားရဲ့ ချောင်းဆိုးသံကို ကျွန်တော် မကြိုက်ချင်ဘူး။
လူနာ ။ ကျွန်တော် တခြားလို မဆိုးတတ်ဘူး ဆရာ။
« Last Edit: September 21, 2011, 09:19:09 AM by tunaye2011 »
« Reply #696 on: September 21, 2011, 10:38:31 AM »
ယောက်ျားကြီး စိတ်ပျက်ပြီး ဆိုင်ထဲမှထွက်လာသည်။
နောက်မှ စားပွဲထိုးပြေးလိုက်လာပြီး အော်ပြောသည်။
"ကျွန်တော်တစ်ခု ပြောဖို့ မေ့သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာဝက်သားဟင်းလဲ မရပါဘူး"
လေးနှစ်သားကိုတိုး နှင့် ခြောက်နှစ်သားကိုဖြိုးတို့ မျောက်ညီနောင်သူတို့အဘွားအိမ်သို့ အလည်ရောက်နေသည်။
ညအိပ်ချိန်တွင် မျောက်ညီနောင်အား အဘွားမှ ဘုရားရှိခိုး ခိုင်းဧ။်၊ ဘုရားရှိခိုးပြီးသောအခါ
ကိုဖြိုး။ ။ ဟေ့ကောင် ဘာလို့ အကျယ်ကြီးဆုတောင်းနေတာတုန်းကွ ၊ ဘုရား က နားမလေးပါဘူး။
« Last Edit: September 21, 2011, 03:39:44 PM by tunaye2011 »
« Reply #697 on: September 21, 2011, 02:53:12 PM »
လွန်ခဲ့တဲ့ ခုနှစ် နှစ် ရှစ်နှစ်လောက်က ဟာသလေးပါဗျာ
ရယ်မိသွားရင်တော့ ဝမ်း ဗုက်ပဲဗျ
စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီကွမ်ယု ရယ်။ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် မဟာသီယာ ရယ်။ ဖိလစ်ပင်း သမ္မတ - အာရိုယိုရယ်။ မြန်မာပြည်က တို့ခေါင်းဆောင်ကြီး ရယ်
အာဆီယံစည်းဝေးပွဲတက်ဖို့ ဘန်ကောက်ကို ရထားနဲ့ သွားကြတယ်။
ရထားဟာ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုထဲကို ၈ စက္ကန့်ကြာအောင် ဖြတ်သွားရပါတယ်။ လိုဏ်ခေါင်းဆိုတော့ ရထားထဲမှာ ရုတ်တရက် လုံးဝ မှောင်မဲသွားတာပေါ့။
အဲဒီခဏမှာပဲ နမ်းရှုပ်သံပေါ်လာပြီး တစ်ဆက်ထဲမှာဘဲ ပါးချလိုက်တဲ့အသံကိုပါ အားလုံးကြားလိုက်ရတယ်။
ရထား လိုဏ်ခေါင်းထဲက ထွက်လာတော့
ထိုင်ခုံတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ ထိုင်နေတဲ့ တို့ခေါင်းဆောင်ကြီး နဲ့ အာရိုယိုတို့ဟာ ဇဝေဇ၀ါ မျက်နှာထားနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြည့်နေကြပါတယ်။
မစ္စတာလီ ရဲ့ ရှေ့တည့်တည့်မှာရှိနေတဲ့ မဟာသီယာကတော့ အရိုက်ခံထားရသလိုမျိုး မျက်နှာကြီးနီရဲနေပြီး မေးထောက်ကာ ထိုင်နေပါတယ်။
သူတုိ့အားလုံးဟာ လူကြီးလူကောင်းတွေပီပီ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘာစကားမှ မပြောပဲ အသီးသီး အသက အသက အတွေးကိုယ်စီနဲ့ ငြိမ်နေတာပေါ့ကွယ်။
တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးက ဘာတွေးသလဲ ဆိုတော့
“အင်း၊ မိုက်လိုက်ပါပေ့ မဟာသီယာရယ်။ မင်းက ကောင်မလေးကို မှောင်ထဲမှာ သွား နသားပါးယားလုပ်တာကိုးကွဲ့။ ပါးချခံရတာတောင် နည်းသေး။ ဟီဟိ။”
အာရိုယိုက ဘာတွေးနေသလဲဆိုတော့ -
“မိုက်လိုက်ပါပေ့ မဟာသီယာရယ်။ နမ်းမဲ့နမ်းရင်လဲ ငါ့တည့်တည့်လာနမ်းမှပေါ့။ ခုတော့ မင်းက တို့ခေါင်းဆောင်ကြီး ကိုမှ သွားနမ်းမိလျှက်သား ဖြစ်နေတယ်။
ပါးအချခံရတာ ငါ စိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်။ ကျွတ် - ကျွတ် - ကျွတ်”
မဟာသီယာကတော့ ပါးကိုပွတ်ရင်း ဘာတွေးနေသလဲဆိုရင်
“တောက်၊ နာသကွာ။ ဟို စစ်သားကောင်စုတ် အတင်းဖက်နမ်းတာကို ကောင်မလေးက ငါနမ်းတာမှတ်ပြီး ငါ့ပါးကို လာချသွားတယ်။
မင်းတော့ နေနှင့်ဦးပေါ့ကွာ။ တစ်နေ့နေ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့။”
သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ တွေးနေသူကတော့ မစ္စတာ လီပေ့ါကွယ်။
“အင်း၊ နောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုကို ထပ်ဖြတ်မှ နမ်းသံပေးပြီး မဟာသီဟာကို ထပ်တွယ်ရမယ်။
ဒီကောင့်ကို ကြည့်မရတာ ကြာပြီ။ ဒီတစ်ခါ နာနာလေးနှက်မှ။”
ခင်ဗျားတို့လဲ ရထားစီးရင် ကိုယ့်ဘေးနားကလူ ဘယ်လိုလူလဲလို့ သတိထားကြပေါ့်။
တော်ကြာ မဟာသီယာလို ဖြစ်နေမယ်။
« Reply #698 on: September 22, 2011, 01:53:47 AM »
တခါကအိမ်တအိမ်မှာထမင်းလာစားဖို့ဧည့်သည်၃ ယောက်ဖိတ်ထားတယ်တဲ့။ တကယ်တမ်းမှာတော့ဧည့်သည် ၁ ယောက်ကလုံးဝမလာပဲ၊ ၂ ယောက်ပဲလာပါတယ်တဲ့၊
အိမ်ရှင်ကအဲဒီမှာ “ဟင်း လာသင့်တဲ့လူကမလာဘူး” လို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့။
အဲဒီလိုပြောလိုက်လို့ ဧည့်သည် ၂ ယောက်အနက်တယောက်က “ဪ ငါကမလာသင့်တဲ့ လူပေါ့” လို့တွေးမိလို့စိတ်ဆိုးပြီးချက်ချင်းပဲထပြန်သွားတယ်တဲ့။ဧည့်သည် ၁ ယောက်ပဲကျန်တော့တာပေါ့။
အဲဒီမှာအိမ်ရှင်က “ဟာ မပြန်သင့်တဲ့သူကပြန်သွားပြီ” လို့ပြောလိုက်ပြန်ပါသတဲ့။
အဲဒီအခါ ကျန်နေတဲ့တယောက်ကလဲ “ဪ ငါကို ပြန်သင့်တဲ့လူလို့ပြောတာကိုး” လို့စဉ်းစားပြီး၊စိတ်ဆိုးပြီးပြန်သွားပါလေရောတဲ့။
« Reply #699 on: September 22, 2011, 01:55:02 AM »
အိမ်ရှင်ကနောက်တခါထပ်ခေါ်တယ်။ အဲဒီလူကလဲနောက်တချိန်ထပ်ငြင်းပြန်တယ်။ ငြင်းသာငြင်းလိုက်ရတာဗိုက်ကတော်တော်ကိုဆာနေပြီလေ။
ဖြစ်ချင်တော့အိမ်ရှင်ကလဲ ၂ ခါ ခေါ်ပြီးသွားပြီး၊နောက်ထပ်မခေါ်တော့ဘူးတဲ့။